दुई वर्ष भयो श्रीमान्सँग यौनसम्पर्क नराखेको,अर्को पुरुषसँग १५ महिना लगातार….. – हाम्रो ईकोनोमी
दुई वर्ष भयो श्रीमान्सँग यौनसम्पर्क नराखेको,अर्को पुरुषसँग १५ महिना लगातार…..
यी सबै कुराको निचोड र मेरो मनको खुल्दुली के हो भने अब एक-दुई महिनाभित्रै मेरा श्रीमान् घर आउँदै हुनुहुन्छ । मैले अरू कसैसँग यौनसम्पर्क राखे-नराखेको उहाँलाई थाहा हुन्छ ? थाहा हुन्छ भने कसरी ? थाहा हुँदैन भने कसरी ? के यस्तो कुरा थाहा पाउने कुनै उपाय छ ? के महिलाले आफ्नो यौनचाहना दबाएर राख्नुपर्छ ? गोप्य तरिकाले सम्बन्ध राख्न पाइँदैन ? यो अधिकार महिलालाई छ कि छैन ?–र।
यस्ता सम्बन्धका कुरा खुल्दा व्यक्तिगत रूपमा पनि यसले अनेक समस्या आउँछ । यसले तनाव पनि हुन्छ भने वैवाहिक सम्बन्धमा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ । आघात परेको व्यक्तिको क्रोधको सीमा रहँदैन । लाजको भावना, उदासीपन, सामना नै गर्न नसकिने शक्तिहीनताको स्थितिमा पुगिने, सिकार बन्न पुगेको स्थिति वा लत्याइएको अनुभव हुन्छ ।
यस्तो स्थितिमा कुनै कुरामा मन केन्दि्रत गर्न गार्होु हुनुका साथै निरन्तर रूपमा घटनाको चिन्ता वा सोच आइरहन्छ अनि दैनिक रूपमा कुनै पनि काम गर्न नसकिने हुन्छ । आफ्नी श्रीमतीले यसो गरेको थाहा पाउँदा पुरुष प्रधान समाजको श्रीमान्लाई समेत ठूलै आघात पर्न सक्छ ।
सुरुमा धेरै नकारात्मक कुरा आउँछ, तर त्यसबाट बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ । यो बेलामा शारीरिक स्वास्थ्यको पनि त्यति नै ख्याल राख्नुपर्छ र हेरचार गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नेपाली समाजमा धेरैजसो स्थितिमा परिवारभित्र वा बाहिर सहयोग गर्ने व्यक्ति भेटिन्छन् नै । दुःखबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । परिस्थिति केही स्थिर भएपछि कसरी सम्बन्धलाई अघि बढाउने भन्ने कुरा गर्दै जानुपर्छ । बारम्बार पुराना कुरा बल्भिम्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनप्रति पनि त्यत्तिकै सजग हुनुपर्छ ।
त्यसपछि पहिले प्राप्त भएको सूचना वा जानकारीका आधारमा अब के गर्ने भन्ने निर्णय गरिन्छ । कतिपय दम्पती पारपाचुके -विवाह सम्बन्ध-विच्छेद) गर्ने निर्णयमा पुग्न सक्छन् भने अघि बढ्ने निर्णय पनि गर्न सक्छन् । आफ्ना र आफ्नो जोडीका बारेमा सिकिएका वा जानेको कुराका आधारमा आवश्यक प्रतिबद्धताका साथ सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्नतर्फ लागिन्छ । यहाँ माफी दिन सक्नुलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र नकारात्मक सोच, भावना एवं व्यवहारबाट परै राख्न प्रयास गरिन्छ । प्रगतिअनुरूप बिस्तारै अघि बढिन्छ, तर यसका लागि कैयौँ साता वा महिना लाग्न सक्छ ।